NDEUPI MUSIYANO PAKATI PEAPTLOOK & HOTMAIL AKAUNTI? - NYORO
Ndeupi Musiyano Pakati peAptlook & Hotmail Akaunti?
Ndeupi Musiyano uripo Pakati peAptlook Uye Hotmail Akaunti? Kune akawanda masevhisi anopiwa neMicrosoft nemamwe makambani ayo anotendera iwe kuti ugare uchitaurirana nenyika yekunze. Aya masevhisi anokupa iwe yekuvandudzwa nezve yekunze nyika nezve zviri kuitika kunze kwenyika uye rega iwe ugare wakabatana nevamwe vanhu kuburikidza nemeseji, maemail uye mazhinji mamwe manyuko ekutaurirana. Zvimwe zvezvinyorwa ndeYahoo, Facebook, Twitter, Outlook, Hotmail uye zvimwe zvakafanana izvo zvinokuchengetedza iwe kufanana nenyika yekunze. Kuti ushandise chero eaya masevhisi, iwe unofanirwa kugadzira yako yakasarudzika account uchishandisa chero rakasarudzika zita rezita senge email id kana nhare mbozha uye kumisikidza password inozo chengeta account yako yakachengeteka uye yakachengeteka. Mamwe emasevhisi aya anobatsira uye vanhu vanoashandisa muhupenyu hwavo hwezuva nezuva nepo mamwe asinganyanyobatsira uye nekudaro, haashandiswe nevanhu vazhinji.
Kunze kwemasevhisi ese aya, maviri akakodzera masosi anovhiringidza vazhinji vevanhu Outlook uye Hotmail. Vazhinji vevanhu vanotadza kuona mutsauko pakati pavo uye vazhinji vacho vanofunga kuti Outlook neHotmail zvakafanana uye pasina mutsauko pakati pavo.
Kana iwe uri mumwe wevanhu ivavo vanowanzovhiringidzika pakati peOptlook neHotmail uye muchida kuziva kuti ndeupi musiyano chaiwo pakati pavo, saka mushure mekuverenga chinyorwa ichi kusahadzika kwako kuchajekeswa uye iwe uchave wakajeka nezve chii chiri mutete mutsetse pakati peOptlook uye Sravana Sameeralu Serial 4th Hotmail.
Chii chinonzi Outlook?
hatina kukwanisa kubatanidza kune yekuvandudza sevhisi. tichaedza zvakare gare gare
Iyo maonero maneja wega ruzivo rwakagadzirwa neMicrosoft. Izvo zvese zviripo sechikamu cheHofisi yavo Suite uye seyakasarudzika software. Inonyanya kushandiswa seemail application asi zvakare ine khalendari, maneja webasa, maneja maneja, kutora-kutora, magazini uye webhu browser. Microsoft yakaburitsawo mafomu efoni kune mazhinji epuratifomu mapuratifomu anosanganisira IOS uye Android. Vagadziri vanogona zvakare kugadzira yavo yechinyakare software inoshanda neAptlook uye Hofisi zvikamu. Pamusoro peizvi, Windows Nhare mbozha dzinogona kuwiriranisa ingangoita rese data reOptlook kuAptlook Mobile.
Zvimwe zvezvinhu zveAptlook ndezvi:
Chii chinonzi Hotmail?
Hotmail yakavambwa muna 1996 naSabeer Bhatia naJack Smith. Yakatsiviwa ne Outlook.com muna 2013. Iyo webhu-based suite yewebhumail, vanobatika, mabasa, uye makarenda masevhisi kubva kuMicrosoft. Inofungidzirwa seyakanakisa epasi rose webmail masevhisi mushure mekunge yawanikwa neMicrosoft muna 1997 uye Microsoft yakazvitangisa seMSN Hotmail. Microsoft yakachinja zita rayo kakawanda mukati memakore uye shanduko yazvino yakanzi Outlook.com kubva kuHotmail sevhisi. Shanduro yayo yekupedzisira yakaburitswa neMicrosoft muna 2011. Hotmail kana ichangoburwa Outlook.com inomhanyisa mitauro yeMetro dhizaini yakagadzirwa neMicrosoft iyo inoshandiswa zvakare pane avo masisitimu anoshanda- Windows 8 neWindows 10.
Hazvina basa kuti uve nemahwindo anoshanda sisitimu kuti umhanye Hotmail kana Outlook.com. Iwe unogona kumhanya Hotmail kana Outlook.com mune chero webhu bhurawuza yechero inoshanda system. Iko kune zvakare Outlook app iyo inoita kuti iwe usvike iyo Hotmail kana Outlook.com account fomu yako foni, piritsi, iPhone, nezvimwe.
Zvimwe zvezvinhu zveHotmail kana Outlook.com ndeizvi:
windows 10 kukwidziridzwa kwakamira pa 99
Musiyano Pakati peAptlook neHotmail
Sezvawakaona pamusoro apa kuti Outlook yakasiyana chaizvo neHotmail. Maonero acho chirongwa cheemail cheMicrosoft nepo Hotmail ichangopfuura Outlook.com inova yavo yepamhepo email sevhisi.
Chaizvoizvo, Outlook ndiyo yewebhu webhusaiti iyo inoita kuti iwe utarise yako Hotmail kana Outlook.com email account.
Pazasi pane misiyano yakapihwa pakati peAptlook neHotmail pahwaro hwezvimwe zvinhu:
Maonero iemail inowanikwa kune ese windows uye mac masisitimu anoshanda nepo Hotmail kana Outlook.com iri yepamhepo email sevhisi iyo inogona kuwanikwa kubva kune chero chishandiso nechero webhu bhurawuza kana Outlook nhare mbozha.
Shanduro nyowani dzeAptlook dzakagadzirwa nenzira yekuti dzinoita sedzakachena kupfuura dzeshanduro dzekare.
password chengetedza hard drive
Outlook.com kana Hotmail zvinowedzeredzwa zvakanyanya kubva kumashanduro apfuura uye mumwedzi iri kuuya, Outlook.com ichagadziridzwa nekutaridzika kutsva uye nekuwedzera mashandiro, chengetedzo, uye kuvimbika. Akaunti yeemail yeOptlook.com inoguma ne @ outlook.com kana @ hotmail.com
Hotmail haisisiri yeemail sevhisi asi @ hotmail.com kero dzeemail dzichiri kushandiswa.
Hotmail kana Outlook.com inopa akati wandei sarudzo dzekuchengeta yako inbox yakarongeka. Ese maemail akarongedzwa zvinoenderana nemaforodha. Aya mafolda ari nyore kwazvo kuwana uye kushandisa. Iwe unogona zvakare kudhonza uye kudonhedza maemail mukati uye pakati pemafolda kuti uchengete iwo. Kune mamwezve mapoka aunogona kuendesa kumeseji uye izvi zvikamu zvinoonekwa padivi rerutivi.
Outlook, kune rumwe rutivi, yakafanana nechero imwe sevhisi yeMicrosoft iyo inokupa iwe sarudzo kuti ugadzire faira nyowani yeemail, kuvhura chero faira, chengeta faira, kubhurawuza mafaera, mhando dzakasiyana dzemafonti kunyora faira uye zvimwe zvakawanda zvimwe zvinhu.
Outlook inokutendera iwe ne1Tb yekuchengetedza kubva pakutanga. Icho chikuru kwazvo chekuchengetedza uye haumbofi wakapera kana kumhanyisa kunyangwe yakaderera yekuchengetedza. Izvo zvakanyanya kupfuura izvo Hotmail kana Outlook.com yakambopa. Kana iwe ukambopererwa nechengetedzo iwe unogona zvakare kukwidziridza yako yekuchengetedza uye izvo zvakare zvemahara.
Ose maOptlook neHotmail kana Outlook.com ane zvakafanana zvidziviriro maficha anosanganisira akawanda-factor kuvimbisa maitiro, epamberi faira, uye email encryption, Visio magwaro manejimendi manejimendi uye akakosha admin masimba anovagonesa kuona ruzivo rwakashata. Kuita kuti ruzivo rwekufambisa ruve rwakachengeteka, chinongedzo kune zvakabatanidzwa zvinogona kutumirwa panzvimbo pemafaira ezvibatanidzwa.
Kuti ushandise Outlook, unofanirwa kunge uine email kero. Kune rimwe divi, Hotmail kana Outlook.com inokupa iwe email kero.
windows 10 kugadzirisa kutangazve pasina yambiro
Nekudaro, kubva pane ese ataurwa ruzivo, zvinopera kuti Outlook chirongwa cheemail apo Outlook.com iyo yaimbozivikanwa seHotmail iri pamhepo sevhisi sevhisi.
Ndinovimba ichi chinyorwa chakabatsira uye iwe unogona ikozvino nyore kuudza iyo Musiyano Pakati peAptlook Uye Hotmail Akaunti , asi kana uchine chero mibvunzo zvine chekuita negwara iri saka inzwa wakasununguka kuvabvunza muchikamu chemashoko.
sei kubvisa yekuisa isina kutsigirwa meseji
chrome inoshandisa yakawandisa cpu
mudziyo uyu haugone kutanga. (kodhi 10) network adapta
nei netflix isiri kushanda palaptop yangu
kuhwina gumi ndangariro manejimendi manejimendi